Sakanan ara-pahasalamana :: Nosokafana ny maraina tontolo ny lalam-pirenena fahafito • AoRaha
Sakanan ara-pahasalamana Nosokafana ny maraina tontolo ny lalam-pirenena fahafito
Mbola nisy ny fitaterana sy fifamezivezen’ny olona nivoaka sy niditra ny faritra Analamanga tamin’iny lalampirenena fahafito mampitohy an’Antananarivo sy Toliara iny, raha ny fanadihadiana natao omaly. Mpandeha avy any amin’ny faritra sy ny vao nanainga teto an-drenivohitra no nifanaretsaka teny amin’ny tobim-piantsonana Fasan’ ny karàna sy Ampasampito, omaly.
Nampahafantarin’ny minisitry ny Fitaterana, fizahantany ary ny famantarana ny toetrandro anefa ny fahataperan’ny fe-potoana ahafahan’ny fiara mpitatitra zotra nasionaly mivoaka sy miditra ny faritra Analamanga amin’ny alalan’ny taksibrosy, afak’ omaly. “Raha ny zava-misy tamin’ny maraina aloha dia tsy nisy mihitsy ny taksiborosy nandeha. Nony tonga anefa ny antoandro no nitombo isa ireo taksiborosy avy any amin’ny faritra sy niainga teto Antananarivo. Maro ny olona taraiky tokony hody ka tsy mbola nisy aloha ny fanakatonana ny fitaterana androany (Ndlr: omaly)”, hoy ny zandary niasa teny amin’ny lalam-pirenena fahafito.
An-kilany, nikatona tanteraka ny teny amin’ny tobim-piantsonana Maki Andohatapenaka, omaly maraina. Ireo fiara mpitatitra entana sisa no afaka nifamezivezy.
“Omaly (Ndlr: alatsinainy), tamin’ny 6 ora hariva ny fiara farany niainga teto amin’ny tobim-piantsonana. Tsy nisy ny taksiborosy mitatitra olona ary tsy nisy mpandeha intsony androany”, hoy ny tale jeneraly lefitry ny tobim-piantsonana Maki Andohatapenaka, Ranaivoson Fidy. Nambaran’ny lehiben’ny Zandarimaria eto Analamanga, tamin’ny onjampeom-pirenena (RNM) omaly, fa “amin’ny 9 ora alina (Ndlr: omaly) no mikatona tanteraka ny fidiran’ny olona avy any amin’ny faritra eto Analamanga”.
Fitsaboana ny covid-19 Mendri-pisaorana sy fankaherezana ireo mpitsabo sy ny ekipany
Fanenjehana varo-maizina Trano fitehirizam-panafody nakatona teny Ambohipo
Basket U-15 an-tambazotra Hotontosaina amin’ny zoma ny lalaon’i Madagasikara
Fanadinam-panjakana Nahemotra ny fisoratana anarana amin’ny CEPE sy BEPC
Lalam-baovao « Rocade Est » :: Mandeha haingana ny asa etsy Andranobevava
Fanamafisana ny ady amin’ny covid-19 :: Hanampy ny mpiara-belona ny Vondron-gazety PREY
Fitsoahana tetsy Ankadimbahoaka Azo sary ilay fiara 4×4 nahafaty zaza enin-taona
Fandresena ny valanaretina Mila governemanta tena miady ny firenena
Fanamafisana ny ady amin’ny covid-19 Hanampy ny mpiara-belona ny Vondron-gazety PREY